Bit By Bit - Ethics - 6.5 abụọ usoro ziri ezi frameworks
Kasị arụmụka banyere nnyocha ụkpụrụ ọma belata nghọtahie dị n'etiti consequentialism na deontology.
Ụkpụrụ ụkpụrụ anọ a nke nkwanye ùgwù maka ndị mmadụ, uru, ikpe ziri ezi, na nkwanye ùgwù maka iwu na mmasị ọha mmadụ na-esite na nsonaazụ omume abụọ ọzọ: njikọrọ na deontology . Ịghọta usoro ihe omume ndị a na-enye aka n'ihi na ọ ga-enyere gị aka ịchọpụta ma cheezie otu n'ime esemokwu kachasị mkpa na ụkpụrụ omume nyocha: iji ụzọ enweghị ike isi nweta mmezu iwu.
Nkọwapụta, nke nwere mgbọrọgwụ na ọrụ nke Jeremy Bentham na John Stuart Mill, na-elekwasị anya na-eme ihe ndị na-eduga n'ọnọdụ ka mma n'ụwa (Sinnott-Armstrong 2014) . Ụkpụrụ Beneficence, nke na-elekwasị anya na ịhazi ihe ize ndụ na uru, gbanyesiri mkpọrọgwụ ike na echiche nke ndị na-eme ka ndị mmadụ. N'aka nke ọzọ, deontology, nke nwere mgbọrọgwụ na ọrụ nke Immanuel Kant, na-elekwasị anya n'àgwà ziri ezi, n'enweghị ihe ọ rụpụtara (Alexander and Moore 2015) . Ụkpụrụ nkwanye ùgwù maka ndị mmadụ, nke na-elekwasị anya na nnwere onwe nke ndị so na ya, gbanyesiri mgbọrọgwụ ike n'echiche nke echiche. A ngwa ngwa na crude ụzọ iche abụọ frameworks bụ na deontologists-elekwasị anya na-esi na consequentialists-elekwasị anya na nsọtụ.
Iji hụ otú ụlọ ọrụ abụọ ndị a si arụ ọrụ, tụlee nkwenye mara ọkwa. E nwere ike iji usoro abụọ a kwado nkwenye ezumike, mana maka ihe kpatara ya. Otu arụmụka na-arụrịta ụka maka nkwenye ziri ezi bụ na ọ na-enyere aka igbochi nsogbu nye ndị na-agụ site nachibido nyocha nke na-emezughị ihe ize ndụ na atụmanya anya. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, echiche nke ndị ọkachamara ga-akwado nkwado nkwenye n'ihi na ọ na-enyere aka igbochi nsogbu ọjọọ maka ndị na-eme ihe. Otú ọ dị, arụmụka deontological maka nkwenye a na-elekwasị anya na ọrụ onye nchọpụta ịkwanyere ùgwù nke ndị na-eme ya. N'iburu ụzọ ndị a, onye na-adọrọ onwe ya nke ọma nwere ike ịdị njikere ịhapụ ihe a chọrọ iji nweta nkwenye mara ọkwa na ọnọdụ ebe ọ dịghị ihe ize ndụ, ebe ọ bụ na onye na-adịghị na-ekwu banyere nkwonkwo agaghị adị.
Ma njirimara ma deontology na-enye echiche dị mkpa, ma onye nke ọ bụla nwere ike iwere ya n'emeghị ihe ọ bụla. Maka ntụgharị uche, otu n'ime ikpe ndị a dị oke njọ nwere ike ịkpọ Transplant . Chee dọkịta nwere ọrịa ise na-anwụ n'ihi ọdịda akụrụngwa na otu onye nwere ahụike nke akụkụ ya nwere ike ịzọpụta mmadụ ise. N'okpuru ọnọdụ ụfọdụ, a ga-ekwe ka dọkịta bara uru-na ọbụna chọrọ-igbu onye ahụ nwere ahụike iji nweta akụkụ ya. Nzube a zuru oke na njedebe, na-enweghị isi, pụtara.
N'otu aka ahụ, deontology nwekwara ike iwere ọnọdụ dị oke njọ, dị ka nke a pụrụ ịkpọ Mgba oge . Cheedị otu onye uweojii nke jidere onye na-eyi ọha egwu maara ọnọdụ nke bọmbụ na-egbu oge nke ga-egbu ọtụtụ nde mmadụ. Onye uweojii na-arụ ọrụ na-adịghị mma ghaghị ịgha ụgha iji ghọgbuo onye na-eyi ọha egwu na-ekpughe ọnọdụ ebe bọmbụ ahụ nọ. Nzube a zuru ezu n'enye ihe, n'enyeghi aka na njedebe, adighi kwa nma.
Na omume, ihe ka ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta ọha na eze nabatara ngwakọta nke usoro ihe omume abụọ a. Ịhụ na ngwakọta nke ụlọ akwụkwọ ndị ọkachamara na-enyere aka ịkọwapụta ihe kpatara ọtụtụ arụmụka gbasara arụmụka-nke na-adị n'etiti ndị na-adọrọkwu na ndị na-abawanye ụda-adịghị enwe ọganihu dị ukwuu. Ndị na-eme nnyocha na-emekarị ka arụmụka banyere arụmụka-arụmụka ndị na-adịghị ekwenye n'aka ndị deontologists, ndị na-echegbu onwe ha banyere ihe. N'otu aka ahụ, ndị na-ekwu banyere ndị ọkà mmụta sayensị na-enyekarị arụmụka banyere ihe, nke na-adịghị ekwenye n'aka ndị na-aba uru, ndị na-elekwasị anya n'ọgwụgwụ. Mkparịta ụka dị n'etiti ndị na-abaghị uru na ndị na-agbasapụ ndị mmadụ yiri ụgbọ mmiri abụọ na-agafe n'abalị.
Otu ngwọta maka arụrịta ụka ndị a ga-abụ maka ndị na-eme nchọpụta mmekọrịta iji zụlite ngwakọta nke nchịkọta na nkwonkwe. O di nwute, nke a agaghi eme; ndị ọkà ihe ọmụma anọwo na-alụso nsogbu ndị a ọgụ ruo ogologo oge. Otú ọ dị, ndị nchọpụta nwere ike iji usoro ihe omume abụọ a - na ụkpụrụ anọ ha na-achọ-ichebara nsogbu ndị metụtara iwu, kọwaa ahịa, ma kwado atụmatụ imezi nyocha.